एकता खेल इन्जिन। मा रूसी एकता 3D
को विकास को वर्तमान चरण मा गेमिंग उद्योग एकदम लोकप्रिय छ। पहिले कम्प्युटर गेम उत्साही को संकीर्ण सर्कल लागि मात्र मजा हो, अहिले यो क्षेत्र पूरै नयाँ चरण जान्छ। थप र मान्छे कम्प्युटर गेम आशक्त छन्, निरन्तर बाहिर विशिष्ट उमेरका र लक्ष्य समूह (, परिवार खेल जस्तै) को लागि उपयुक्त हो कि परियोजनाहरु छ।
स्वाभाविक, यो एक लागि लायक छ - सबैभन्दा अवस्थामा यो सारा कम्पनी धेरै compartments, यसको आफ्नै गतिविधिमा संलग्न छ प्रत्येक जो मिलेर। सँगै, तिनीहरूले सबैभन्दा उल्लेखनीय र आकर्षक आधुनिक कम्प्युटर गेम सिर्जना गर्नुहोस्। तथापि, यो मूल्य टिप्पण छ कि हाल को वर्ष मा इन्डी खेल को एक ठूलो संख्या - परियोजनाहरू स्वतन्त्र विकासकर्ताहरूले। यो एक व्यक्ति, र जस्तै-दिमाग मान्छे को एक सानो समूह, तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुन सक्छ - तिनीहरूले एक विशाल बजेट छैन, उच्च शिक्षा आला संग कार्यकर्ता सयौं। अब सबैसँग, आफ्नै खेल लेख्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा एक विशेष सञ्चालन वातावरणको अवस्थित र यस्तो एकता खेल इन्जिन रूपमा तयार कर्नेल। यस लेखमा तपाईं यो के हो जान्न र तपाईंले यसको आवश्यकता किन।
तपाईं के विशेष एकता खेल इन्जिन छ संग छैन शुरू, तर के मूल इन्जिन हो संग गर्नुपर्छ। कम्प्युटरमा खेल लेखन कल्पना - तपाईं, सबै कोड, बिल्कुल हरेक सानो विरोधीहरूले सार्दा, वर्ण को आन्दोलन स्क्राच पूर्णतया दर्ता वातावरण र विभिन्न भागहरु को पनि हजारौं अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ। अविश्वसनीय गाह्रो छैन यो छ? निकै तपाईं बस गर्न सक्छन् इन्जिन सिर्जना प्रक्रिया सुविधा।
खेल इन्जिन - यो परियोजना को कोर, जो सबै आधारभूत लिपि समावेश गर्दछ। त्यो सट्टा स्क्राच देखि एक खेल बनाउन, तपाईं एक तयार बनाएको कोर लिन र यसलाई आफ्नो सामग्रीको रूपमा धेरै पत्रहरु निर्माण गर्न सक्छन्, छ। यो हुनु हुँदैन यसलाई अवैध कुरा हो कि डर - तपाईं कोर चोरी छैन, र अरूलाई लाखौं जस्तै बस, यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अरु द्वारा बनाईएको खेल इन्जिन प्रयोग - यो एक धेरै साधारण प्रविधी छ, सबै भन्दा ठूलो कम्पनीहरु मात्र आफ्नै खेल इन्जिन ठूलो मात्रा सिर्जना गर्न हालतमा र मौका छ। एकता खेल इन्जिन प्रयोग गर्न राम्रो - तपाईं यसलाई लागि कुनै बजेट छ भने। तर किन उहाँले छ?
त्यहाँ निःशुल्क वा पूर्ण शुल्क लागि नेटवर्क को कुनै पनि भाग मा उपलब्ध इन्जिन को एक विशाल विविधता छ। तिनीहरूले तपाईंलाई 2D मा डिजाइन बनाउन अनुमति र 3D मा, तपाईं विभिन्न सुविधा र यति मा पहुँच खुल्नेछ। तर तिनीहरूलाई बीच किन एकता खेल इन्जिन कुनै पनि अन्य छनौट र हुँदैन?
वास्तवमा, कुनै एक तपाईं छनौट गर्न जानुहुन्न - उदाहरणका लागि, जो धेरै प्रयोग 3D मा खेल बनाउन UDK, को एक धेरै राम्रो कोर छ। तपाईंले तीन-आयामी छवि रुचि छैन भने, तपाईँले सजिलै संवाददाता आयोमी इन्जिन संग एक परियोजना सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तर एकता - सबै आज उपलब्ध सबैभन्दा लोकप्रिय र उच्च गुणस्तरीय तीन आयोमी इन्जिन हो, त्यसैले तपाईं निश्चित आफ्नो नाम कसरी प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ। एकता 3D खेल इन्जिन जो थप छलफल गरिनेछ अरु, केहि गम्भीर लाभ छ।
एकता को लाभ
एकता - 3D खेल बनाउनको लागि नयाँ इन्जिन। तपाईं यसलाई चयन गर्न आवश्यक किन धेरै आश्चर्य। अघि भने गरिएको छ रूपमा, कसैले तपाईं यसलाई आफ्नो छनौट रोक्न जानुहुन्न। तर अब ऊ बाँकी देखि बाहिर खडा के थाहा।
पहिले, यो एक विकास पर्यावरण छ - तपाईं एक दृश्य सम्पादक दुवै र सम्पादक सुविधा, र एउटा सानो लिपि सम्पादक जसमा एक अति सहज र कार्यात्मक आईडीई, संग प्रदान गरिन्छ। उत्तरार्द्ध सन्दर्भमा - प्लस तपाईंले पहिले नै कुनै पनि मामला मा प्रयोग गर्न हुनेछ जो यसको आफ्नै पटकथा भाषा, छ भन्दा इन्जिन मा यस, अन्य पृष्ठभूमि मा विशेष गरी सजिलै देखिने छ। एकता को मामला मा, तपाईं स्थानीय भाषा, साथै अन्य कुनै पनि या त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी पनि खेल सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर ग्राफिक्स को स्तर उल्लेख गर्नुपर्छ - यो एकदम भन्दा अन्य इन्जिन तुलना मा उच्च छ। र, को पाठ्यक्रम, यो भौतिक को उच्चतम स्तर टिप्पण लायक छ - तपाईं, पाठ्यक्रम साथै एक परियोजना कुनै पनि आधुनिक कृति, सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ कारण कौशल संग।
निष्कर्षमा, यो लागत बारे भने गर्नुपर्छ - यो हुन्छ कि एक अवरोधलाई धेरै नयाँ विकासकर्ताहरूको लागि। केवल एक र एक हजार आधा डलर - यो मामला मा, यो पनि उच्च छ। इच्छित भने, तपाईं नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्न सक्छन् - यो पूर्णतया कार्यात्मक छ, तर उपयोगी सुविधाहरू एक निश्चित संख्या छैन। साथै, समाप्त परियोजना सधैं खेल मा एकता लोगो प्रदर्शन गर्नेछ। अब तपाईं बुझ्न किन एकता 3D - एक लोकप्रिय खेल इन्जिन। तर वास्तवमा यो बेफाइदा छैन? अब हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं।
धेरै यो इन्जिन संग दोष फेला पार्न प्रयास गरेका छन्, तर केही कठिनाइ उजुरी माथि ढेर केवल एक - स्रोत कोड बन्द। एक अर्थमा, यो साँच्चै बेफाइदा छ - तपाईं मात्र कर्नेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जो तपाईं एक डेभलपर दिन्छ, तपाईं यसलाई कुनै पनि परिवर्तन, तपाईं यसलाई कसरी के थाहा पनि गर्न सक्दैन। तपाईंलाई पन्ध्र सय डलर भुक्तानी भन्ने तथ्यलाई विचार - लाइसेन्स अझै पनि तपाईं कर्नेल नै पहुँच दिन छैन। तर यदि तपाईं अर्कोतर्फ हेर्न, लगभग कुनै आधुनिक इन्जिन नकारात्मक ठूलो खण्डका एक गम्भीर दोष छलफल गर्न सकिन्छ भनेर तपाईं कर्नेल कोड पहुँच दिन छैन। र यो सुन्दर इन्जिन अन्य कमीकमजोरी छैन पाउन सकिन्छ।
आईडीई बस उहाँलाई लागि राम्रो - यो इन्जिन को प्रयोगको बारेमा अघि भने गरिएको छ। यो यस्तो कार्यात्मक विकास अनावश्यक विवरण लोडमा छैन पूर्ण नग्न र असहज हुनेछैन छ वातावरण पाउन दुर्लभ छ। एकता मा, सबै ठीक गरेको - तपाईं तुरुन्तै सम्पादक र खेल दृश्य पहुँच र खेल सुविधाहरु, र लिपि गर्न पाउन सक्छौं, तिनीहरूलाई लागू हुन्छ। तपाईं सीधा आईडीई तपाईं काम गरेको छ, जो ती कुराहरू को वास्तविक समय खण्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकता त्यहाँ बस कुनै प्रतियोगिता हो - इन्जिन ठूलो छ।
के तपाईं अंग्रेजी बोल्नु हुन्छ भने, तपाईंले अझै पनि एकता फाइदा लिन सक्छ, चिन्ता छैन। रूसी अवस्थित मा खेल इन्जिन तपाईंलाई सजिलै खेल अनुवाद संस्करणमा masterpieces सिर्जना गर्न सक्षम त र सक्रिय, समर्थित। यसबाहेक, ठूलो रूसी भाषा बोल्ने इन्टरनेट यो इन्जिन समर्पित समुदाय छ - तपाईं अनुभवी प्रयोगकर्ता को राय पढ्न र आफ्नो प्रश्न, नवीनतम समाचार पाउन सक्नुहुन्छ। मा रूसी Unity3D - यो एकदम सम्भव छ।
यसलाई तपाईंले पहिले नै मा कर्नेल कोड परिवर्तन गर्न प्राप्त छैन भने गरिएको छ। तर तपाईं आफ्नो लिपि थप्न वा अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा बनाइयो कि व्यक्तिहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्छन्।
कल अफ ड्युटी: विकसित लडाइँलाई - गाइड (भाग 1: बुद्धि)। कल अफ ड्युटी: विकसित लडाइँलाई - प्रेत (खण्डमा)। कल अफ ड्युटी: विकसित लडाइँलाई - सर्वोच्चता (खण्डमा)
एक व्यक्ति "Maynkraft" कसरी बनाउने, वा बासिन्दा संसार भर्न
माउन्ट Hyjal युद्ध। महाकाव्य Inst
प्ले Skyrim। कुनै आवाज छ? हामी एक समाधान खोज्न
के "डट" छ: परिभाषा र वर्णन
फरनहाईट: एक मनोवैज्ञानिक रोमाञ्चक को खण्ड
डम्प ट्रक "मानिस" - एक वास्तविक मानिस को उपकरण
आफ्नो हातले एक वक्ता कसरी बनाउने?
पवित्र Irina Velikomuchenitsa
आज थकित गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ रुझान
मलम सेल्युलाईट को "Kapsikam"?
AN-148-100: को सानो घर मा सबै भन्दा राम्रो सिट, फोटो
आफ्नो हातले फोम काटन मिसिन
को Kirovograd क्षेत्रमा मत्स्य पालन: नि: शुल्क र भुक्तानी reservoirs
नतीजा नयाँ भेगास लन्चर सुरु गर्दैन। कारण समाधान
सबै भन्दा साधारण गलतफहमियहरुलाई - आयोडिन संग दूध।
कसरी एक प्रमुख बिना ढोका फोन खोल्न (Vizit र अरूलाई): व्यावसायिक र लोक तरिका